Ọdịnihu nke SEO: Nghọta site na mgbu
Ọtụtụ ọnọdụ na-emetụta ebe ahịa ịntanetị, ebe ọchụchọalgọridim na-agbanwe ọ bụla ugbu a na mgbe ahụ. N'ihi ya, ndị ahịa na-eche ma njikwa njikwa search (SEO) ga-anọgidedị mkpa n'afọ iri na-abịanụ. N'ime afọ ndị gara aga, ndị na-ere ahịa na dijitalụ na-adabere na isiokwu ma jikọta ụlọ iji zụọ ọdịnaya hasite na nyiwe n'Ịntanet - casetta con scivolo usata. N'oge a, ndị ahịa na-adabere na SEO na search engines ịkwọ ụgbọala, mee ka ndị mmadụ gbanwee, naeme ka ọnụ ọgụgụ ahịa dịkwuo elu.
Ndị ahịa ahịa ga-agbanwe usoro atụmatụ SEO, Google ga-agbanwealgorithms, ma SEO agaghị anwụ. SEO agbanweela n'ihi mgbanwe ndị algorithms Google. Na nyocha ọchụchọnjikarịcha, ndị ahịa na-arụ ọrụ megide ibe ha, dịka na agbụrụ ebe ndị ọgba ọsọ na-asọmpụ ibe ha, ma ọ bụ nanị otu n'ime ha na-enweta mmeri.
Ryan Johnson, onye ahịa na-ahụ maka ihe ịga nke ọma Ọkachamara Ọrụ Ntanetị na-akọwa ihe ndị na-eme ka mgbanwe SEO na ihe ọdịnihu ya.
Ọmụmụ SEO na mmalite nke Google
E guzobere Google dị ka njinaka nke onwe ya na-enye nsonaazụna-adabere n'ọtụtụ ihe. Ndị ahịa ahịa nke ụwa malitere iji Google mgbe mmeghe nke algorithms ogo. Tinyere nke a,SEO emeela nke mbụ dị ka aghụghọ maka Ịntanetị, mana ọ bụghị dịka atụmatụ ahịa.
Omume ime ihe na-adaba na ogo algorithms, dị ka cheatersweere uru nke omume a site na ikwughachi ọtụtụ okwu na ọdịnaya ha ọtụtụ ugboro dị ka o kwere mee. Okwubata nkemmelite algorithm na nchịkọta nchịkọta nke Google natara na cheaters na-eme ka ha ghara ịga n'ihu na omume.
N'afọ 2003, Google wepụtara ikikere inbound njikọ nke na enyere akana saịtị na-eme ka ịdee ọdịnaya site na weebụ ma na-ekwughachi okwu ọbụla ọtụtụ ọnụọgụgụ nke oge.
Ọnọdụ dị ugbu a SEO na Google
Gbasara algọridim dị mgbagwoju anya nke Google mere ka SEO ruo ebenke nkwụsi ike site n'afọ 2010. Otú ọ dị, SEO nwetara ọganihu ọzọ n'ihi mmalite nke mmelite Panda na 2011 na Penguin melite na 2012.Mgbasaozi Panda na-eji ihe ndozi juputara, ọdịnaya ọdịnaya-ọdịnaya, na ihe a na-eme ka ọ bụrụ ihe a na-eme ka ọ bụrụ ihe dị iche iche. N'aka nke ọzọ, nkeNtinye ntanetị nke eji eme ihe na-eme ka ndị ọrụ ntinye na njikarị na-eme ka ha nwee ike ịkọwa aha.
Na nso nso a, Google gosipụtara ihe ndị na-achọpụta ọnọdụ dị iche iche nke saịtị, akaranke usoro ntanetị mgbasa ozi, na SSL ezoro ezo. Iji nweta ogo dị elu, onye ahịa ga-arụ ọrụ na ọdịnaya ọdịnaya na inboundjikọta profaịlụ. Ihe mgbaru ọsọ bụ isi nke ọ bụla Google algorithm melite bụ ịmepụta ihe ndị a pụrụ ịdabere na ya.
Ọdịnihu nke SEO na azụmahịa online
SEO ejirila tụnyere oge gara aga, ebe e weere ya dị ka onye aghụghọkoodu. Ọdịnihu nke SEO na-aga n'ihu na mmepe Google. N'oge a, Google na-arụ ọrụ n'inye ndị ọrụ bara uru ma dị mkpaozi. Ọdịnihu nke SEO ga-agbanwekwa ka ebumnuche Google, ebe ndị ahịa ga-enye ndị ọrụ dị mkpaozi.
Ọtụtụ nkọwa a na-agbanwegharị na ọnwụ SEO. Naaga n'ihu, SEO ga-elekwasị anya n'ịnye ndị ọrụ ahụmahụ ndị na-echefu echefu na ndị bara uru, kama ilekwasị anya na njikọ azụ na isiokwu.Nọgide na-emecha atụmatụ gị SEO ozugbo enwere ike ime mgbanwe iji chọpụta algọridim.